Kalgan kunye nezinye izityalo ezincedo
Ngomhla kaFebhuwari wothando, emva komda wothando ungomelezwa kungekhona nje ngelayerie, ikhandlela ezikhanyayo kunye nephunga le-sandalwood. Kwi-arsenal yezobisi zamachiza, kwakhona, kukho intlangano ethembekileyo ye-Aphrodite, inokwandisa umnqweno wesondo, umzekelo, i-kalgan nezinye izityalo ezincedo.
Kukho inkolelo eyaziwayo phakathi kwabantu : ukuba unayo iqabunga likaKalgan (lapchatka lime), yonke iminqweno iyazaliseka. I-Phyto-therapeutists bayayazi enye impawu zolu hlobo lwezokwelapha: ngaphandle kweetannic, izakhiwo ezinqabileyo kunye nezichasayo, i-decoction yeKalgan kunye nezinye izityalo ezisebenzayo zinceda ukuqonda iimfuno ezifihlakeleyo ngokunyusa ukwanda komnqweno wesini (kokubili kwabesifazana kunye neentloko). Imvakalelo yothando inikela ngombala kunye nephunga le-remedy - it pink kwaye ihogela njengenkosikazi yeentyantyambo.
I-recipe ye "potion love" ilula: 1 tbsp. l. Iingcambu ezichotshoziweyo zityhala iglasi yamanzi, ubilise imizuzu engama-10, uze uxinzelele kwaye ugxininise ubusuku. Thatha izilwanyana ozifunayo kathathu ngosuku ngeepunipoli ezi-2. l. isiqingatha seyure ngaphambi kokutya 2-3 iiiveki. Kodwa unokuziva umphumo wempendulo ngomhla wokuwamkelwa kwawo. Ngendlela, i-female body kalgan kunye nezinye izityalo ezincedo ziyimfuneko kakhulu-emva kwexesha elide kunye neenyanga ezininzi ezivela kuzo zibuyisela izibonelelo zomzimba. Enye ingcambu yemilingo yi-chicory. Iqukethe i-acid acids, i-vitamin C, iqela B kunye ne-carotene (i-provitamin A), ubuninzi bezinto ezilandelayo: i-potassium, i-calcium, i-phosphorus, i-manganese. Inkosi yamasimi igqithise iinkqubo zokugaya inyama, i-metabolism, ine-antimicrobial, i-anti-inflammatory and astringent effect, iyakhupha iingxaki nge-potency. Ukukhokela indlela ebomini obusondeleyo kuya kunceda ukuhluthwa kwezityalo ezilandelayo (kuthatyathwe kwangaphambili): 1 tbsp. l. Iingcambu ze-chicory ezikhethiweyo zityhila iglasi yamanzi, ubilise imizuzu emi-5, uxinzelelo kwaye ufumane iiyure ezine. Imveliso inomdla obunomuncu, kodwa umdlalo ufanelekile ikhandlela: sibonga kwi-phytonutics, amadoda alala embhedeni abe ngabathandi abanomdla.
Nge-oregano eqhelekileyo , i- moth ekhabhinethi ayibangeli nje i-moth kwikhabhinethi: isityalo esiqholiweyo siyakulinganisa isimo sengqondo esithandekayo, sivuselele iimbilini ezikhululekile, sincede ukucima ukuvuvukala "ngendlela yesifazana," kunciphisa uxinzelelo lwegazi kunye nentloko - ngokubanzi, ukuphelisa konke okuvame ukuphazamisa intle ukuzinikela emandleni enkanuko. Kukho uluvo lokuba amadoda anesisipha, njengoko abiza isityalo se-oregano, kubangele ukungasebenzi kwe-erectile, akunakujamelana nokugxeka. Ukongezelela koko: kunika igalelo legazi kwizitho zengqungquthela, oku kuthetha ukuba ingasetyenziselwa njenge-aphrodisiac esebenzayo. Ngokomxholo wesiGrike, uZeyus, udumileyo ngenxa yeentlanga zakhe ezibuhlungu, ebusweni bakhe wayelisela ubisi lwebhokhwe ephezulu, eyayidla nje i-oregano kunye nobusi obuqokelelwe kwiintyatyambo zayo. I-anti-phyto-medicine yamayeza yanamhlanje ithe yalungiswa ngolu hlobo lulandelayo: 1 tbsp. l. iintyatyambo kunye namaqabunga e-oregano eqhelekileyo, uthele igirazi yamanzi abilayo, ufune imitha engama-20-30 kunye noxinzelelo (okwaneleyo ukusela iipunipoyi 1-2).
Phakathi kwemveliso yokuqala-aphrodisiacs - oysters, shrimps, scallops, ubisi lwekakhukhunathi kunye necolethi. Kodwa kukho abancinci abancedisayo abanothando: izaqathe, i-artichoke yaseJerusalem kunye ... anyanisi. Ubuhle obomvu, umzekelo, amaGrike asendulo ayesetyenziselwa ukwenza intando yothando, kunye nesobho esidumile saseFransi kufuneka isetyenziswe kubasandul 'ukutshata emva kobusuku bomtshato ukubuyisela amandla esondo. Ukongezelela, imifuno enokumemeza icebile kwi-zinc ne-selenium, echaphazelekayo ekuveliseni i-hormone yesondo. I-artichoke yaseYerusalem iqukethe iiprotheni ezininzi ezichaphazela kakuhle imbewu yembewu. Ukusuka kwimifuno, unokwenza isaladi elula: gubungela iidroti kunye nezigubhu zeepareyi zodongwe, nqabisa i-anyanisi uze ugcwalise isitya kunye neoli ye-vegetable.
Sebenzisa izityalo eziwusizo, zonke izipho zendalo kunye nezinye izinto ezincedo, kwaye uya kuhlala usempilweni kwaye umhle!
I-Melon kunye nezibonelelo zayo ezixhamlayo
Ukuncedisa okunomsoco weengxaki zomlenze
Umhlaza wesibeleko unxulumene njani nepapillomavirus yabantu?
Ukusetyenziswa kwesityalo somama nonina
Abadlali baseSpain nabadlali
Ukutya okunokulinganisela kwisifo sikashukela
Iipesheka zokulula kunye ezingabizi
Ungakususa njani ukuzenzela ngokuchanekileyo?
Oko unako kwaye awukwazi ukuyidla ngaphambi kokulala
I-meat zrazy kunye nama-mushroom kunye ne-broccoli
Namathisela i-sauce yamatshu
Xa umona uqala-kukho ukuphela kokuthanda
Iholide lezingane: siya kutyelela kwaye sizinze
Iimveli zentwasahlobo ezayo yamafesisti